कन्चनलाइ हेर्न नेपालकै टप डाक्टर चितवनमा, डाक्टर सगै निरु पुगिन आइसियुमा (भिडियोसहित) – Tufan Media News
१८ माघ २०७७, आईतवार १४:३५
चितवन । कञ्चन तिमील्सीना जो यतिबेला आधा शरीर प्यारालाईसिस भएर अस्पतालको बेडमा पल्टि रहेका छन् । उनै कञ्चनको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउनकोलागी नेपालकै टप मध्यका डक्टर घनश्याम कंडेल यतिबेला चितवन अस्पतालमा पुगेका छन् ।
कञ्चन यो अवस्थाबाट फेरी पहिलाको अवस्थामा फर्कन सक्छन् कि सक्दैनन् ? किनभने यतिबेला कञ्चनको दुवै खु,ट्टाले काम गर्न छाडेको छ । अनिशालाई प्रेम विबाह गरेका कञ्चनले अनिशाले नै वि,बाह भएको केही दिनमै कञ्चनले आफुलाई ज’र्व’ज’स्ती विबाह गरेको र आफुले कञ्चनलाई चिन्दिन भनेको हुनाले उनले वि’ष से’व’न गरेका थिए ।
सोही असरले कञ्चन अहिले प्यारालाईसिस भएका छन् । उनी बाँच्छन् या बाँच्दैनन् भन्ने कुरा नै अन्यौलको थियो ।
तर जब कञ्चन ख,तरा मुक्त भए तब उनी कसैले पनि नसोचेको रोxगको दिxर्घकालीन् बिxरामी हुन पुगे । पुरै २३ दिनपछि कञ्चनको होस् त आयो तर उनी चल्न भने सकेनन् । उनका दुवै खुट्टाले काम गर्न छाडेको छ ।
डाक्टरको भनाई अनुसार यो वि ‘ष’को डो’ज धेरै भएको हुनाले अस,रले भएको हो । उनै कञ्चनकोलागी भनेर यतिबेला चितवनमा डा. घनश्याम पुगेका छन् । डा. घनश्यामको भनाई अनुसार कञ्चनलाई नि,को हुन कति जति समय लाग्छ होला त ? भिडियोसहित